Tarika Mpihira Bokanté Manome Hira Amin’ny Teny Kiriolona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Aogositra 2017 4:59 GMT
Ity tantara avy amin'i Sonia Narang ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 24 Jolay 2017. Navoaka eto indray izany noho ny fifanaraham-piarahamiasa eo amin'ny PRI sy Global Voices.
Nisarika ireo mpiangaly mozika avy amin'izao tontolo izao, hatrany amin'ny Morontsiraka Andrefana ao Canada ny Fetibe Vancouver Jazz. Nitondra feo miavaka manitra gadona Karaibeana, hira Afrikana Tandrefana ary hira milamina Mississippi Delta teny an-tsehatra ny tarika iray. Miantso ny tenan'izy ireo hoe Bokanté izy ireo, izay midika “fifanakalozana” amin'ny teny Kiriolona ao Karaiba.
“Mitondra izany tsiro Karaibeana izany aho, ary mitondra kely amin'ny gadona gwo ka koa, izay gadona avy ao Guadeloupe,” hoy izy, ary manazava ny ezaka nifarimbonana nahatonga ny raki-kiran'ny tarika vao haingana “Strange Circles“.